Dowladda Jarmalka oo Balan-Qaadyo u samaysay Puntland – Radio Daljir
Oktoobar 7, 2015 5:12 b 0
Arbaco, Oktoobar 07, 2015 (Daljir) —Madaxwaynaha Dawladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo weli ku sugan dalka Kenya ayaa magaalada Nayroobe ee caasimadda dalkaasi kula kulmay ku xigeenka safiirka Jarmalka ee Soomaaliya, ahna ku simaha safiirka Ambaasadar Christian Resch, madaxa hay’adda GTZ Hendrik Linneweber, madaxa xiriir-ka iskaashiga Julia V.M. Kronberg iyo wakiilka bangiga horumarinta Jarmalka ee KFW.
Kulanka ayaa looga hadlay hormarinta Mashaariicda Dawladda Jarmalku ay ka wado Puntland,oo ay ka mid tahay dhismaha Jidka dheer ee isku xira Garowe iyo Gaalkacyo, iyo mashaariicyo kale oo horumarineed oo la filayo.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Gaas ayaa madaxda uu la kulmay ka codsaday inay derder geliyaan fulinta mashaariicdaasi , si ay u muuqato kaalinta ay Dawladda Jarmalka ka qaadanayso horumarka baaxadda leh ee ka soconaya guud ahaan Puntland.
Madaxda Jarmalka ayaa balan qaaday in ay dadajiyaan hirgilinta mashaariicda ay ka wadaan Puntland sida mashruuca dayactirka waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacyo ee GTZ, dhawaana ka furanayaan xafiis caasimada Garowe.
Dawladda Jarmalku ay waxay balanqaaday inay sii laba jibaarayso mashaariicda horumarineed ee ay ka fulinayso gudaha Puntland ayna mar walba garab taagan yihiin hurmarka ka socda Puntland.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Saaka iyo Dunida _Arbaco_07